Dzhonni Galeki - nomdlali abanamakhono futhi ebukekayo waseMelika yatha- sibonga nokudutshulwa ahlekisayo ewuchungechunge yethelevishini "The Big Bang Theory." Ngenxa umlingisi ngoba kweshumi amabhayisikobho angaphezu kuka ezine, udlala izindima ezifana ezincane futhi ezinkulu. Johnny wathola uthando akhe zokuba umntwana futhi waqala ukwenza kumafilimu esemncane. Johnny Galecki namuhla liyaqhubeka lijabulisa abalandeli imisebenzi enhle nejabulisayo ngenkuthalo isuswe amaphrojekthi TV nezithombe ezinyakazayo.
Dzhonni Galeki wazalwa edolobheni laseBelgium Bray 30 Apreli 1975. He is an American, njengabazali bakhe, kodwa iminyaka emithathu lokuphila eBelgium. Kuleli zwe, umkhaya wathuthela enkonzweni Richard Johnny Galecki, okuyinto bekatsatsa e-US Air Force. Meri Lu, unina kaJohane, kwaba ngumxhumanisi ku mortgage. Ngo emithanjeni yakhe ageleza Johnny Galecki Irish, Polish igazi Italy. Emkhayeni, nguye omdala, umlingisi has a Allison udade nomfowabo Nick.
Johnny Galecki baye wenza ithalente kwatholakala zisencane. Lapho ngineminyaka engu-iminyaka eyisikhombisa, umfana isivele lasetshenziswa esigabeni ohlonishwa yaseChicago Goodman Theatre. Lapho ngineminyaka engu-11, wenza kahle kakhulu indima yakhe play "ILungu loMkhandlu oPhethe Wedding," okuyinto ithalente abasha abaphakanyiselwe umklomelo zokuhlonipha. Lapho ngineminyaka engu-12, uJohane wanquma enhliziyweni ayezonikela ukuphila kwakhe ebhayisikobho.
Film aseqala zenzeka njengoba osemusha wase-movie "One Night Ekuphileni Kukamalusi Dzhimmi Rirdona". Ngo-1989, insizwa ithole ngendima ifilimu "Christmas Vacation." Wayefuna ukudlala e ifilimu ukuthi waloba test ifilimu. Abakhiqizi bahlatshwa umxhwele ukuphikelela, ukuphikelela okuqinile ithalenta ithalente abasha. Ukwambula yizinhlobonhlobo esebenza Johnny kwaba kuphela ngo-1993, lapho eseneminyaka engu-ku yomunye wabalingiswa yochungechunge "Umndeni Uhlukaniswa". Yingaleso sikhathi-ke ukuthi umlingisi ethile iqala ukubonisa sinake abaqondisi, it is ngenkuthalo ababemenyelwa i ifilimu ezithakazelisayo.
comedy Umkhaya "Mnu Bean" uye ngefilimu ozithandayo ezweni, ngakho-ke Kuthi okhazinyulisiwe futhi Dzhonni Galeki. Waphinde wasiza ajwayelane Dzhennifer lav Hyuitt, actress ethandwa kakhulu, sibonga ngalo le nsizwa indima ifilimu horror "Ngize Ngithole Ukuthi You Did Kugcine Summer."
Nokho nethonya elikhulu kakhulu career kwezobuciko Johnny Galecki has uchungechunge oluthi "Big Bang Theory." Wenza Johnny ethandwa hhayi kuphela e-America, kodwa kuwo wonke amazwe lapho ukusakazwa inikezwe ifilimu. Phela, uma iya kude kangaka. Dzhonni Galeki uhlale umatasa isethi ochungechungeni, kodwa namanje uthola isikhathi kweminye imiklamo. Ukuthandwa nokuthanda izethameli waletha amafilimu umlingisi like "Entourage," "Hancock," "Isikhathi."
Filmography Dzhonni Galeki
Photo of the umlingisi kungabonwa namuhla omagazini abaningi imfashini. Johnny zithandwa kakhulu hhayi kuphela e-America kodwa futhi eYurophu. Ngokokuqala ngqá e-umlingisi ithelevishini isanda emuva ngo-1987, Starring ifilimu "Ukubulala kusengaphambili." Esikhathini esifanayo, wahlanganyela ithelevishini ifilimu «Time Out ngoba ubaba». Ngo-1988, Johnny Galecki waqala esebenza TV ewuchungechunge "Roseanne," okuyinto lwasakazwa on 1997, futhi waba nendima kule drama "Ngobunye ubusuku izinga empilweni Dzhimmi Rirdona". Ngo-1989, udutshulwe ahlekisayo umndeni "Christmas Ukuhlaba Ikhefu" fantasy "Racehorse" futhi uchungechunge TV "Hardboll".
eyishumi okusha yamjabulisa Johnny Galecki izindima ezintsha. Ngo-1990, yena okunenkanyezi films ezine: movie ithelevishini "Blind Okholweni Lwenu Olungcwelengcwele 'futhi« Ukuvikela a Ushadile Man »futhi imbali oluthi' nenhle" futhi "American Dreamer". Ngo-1991, baqala ukudubula ochungechungeni "kulwiwa" futhi ngo-1993 - i-movie ne-TV "Umndeni Uhlukaniswa". Ngo-1994 kwafika idrama noJohnny "Ngaphandle isivumelwano", futhi ngo-1996 - i-Thriller «Murder at Umnyango wami». 1997 I-Johnny Galecki ukuthi ayegcwele, yathathwa amahora amathathu nje: ". AmaKhosi ukuzibulala" the comedy umndeni "Mnu Bean", a Thriller "Ngize Ngithole Ukuthi You Did Kugcine Summer," idrama ubugebengu
Ngo-1998, uJohnny abadlale indima osemusha gay in the comedy "Abobulili Ngocansi". 1999 umlingisi wachitha ukuqopha umbukiso, "Umbukiso Norma", njengoba wahlanganyela izwi wenza "Umndeni Guy" futhi "Batman ngekusasa." Ekhulwini entsha, uJohnny Galecki kancane athikanyezwe ithelevishini futhi uqondiswe emandla awo amabhayisikobho. Eskrinini esikhulu, umlingisi uvele the comedy "izinkinga 100 kanye intombazane" kanye melodrama "Bounce." Ngo-2001 Johnny iye yaba nendima kule drama ubugebengu "Okuwukuphela kwendlela yokuphuma," fantasy "Vanilla Sky" kanye ithelevishini ahlekisayo «Bagtime».
Ngo-2002, uJohnny Galecki bajoyine zokudala piggy ithelevishini movie «Imindeni emibili» futhi «Ukuba Glen». Thina baqala ukudubula ochungechungeni "Queen kwesikrini" ngo-2003 futhi wadedelwa Thriller "bookies". Ngo-2004, uJohnny ajabulela iDemo ifilimu «White Like Me», idrama "Crystal", uchungechunge TV "Entourage" nangokuthi "LAX". Ngo-2005, thina baqala ukuqopha uchungechunge TV "Igama lami ngingu-Earl," "American Ubaba" futhi i-movie ne-TV «Peep Show». Ngo-2006, Johnny Galecki got indima ochungechungeni TV "Ithimba lami", okuyinto senza kuze 2010.
Ngonyaka olandelayo, uJohnny wayengomunye walabo izindima zakhe engcono - ". The Big Bang Theory" Doctor of Science uLeonardo Hofstadter e ifilimu ithelevishini Lolu chungechunge uze, ke umlingisi uchitha isikhathi sakhe esiningi ukusebenza. Naphezu kwakho konke lokhu, uJohnny Galecki kuthatha Ukusikisela ngokudubula izithombe ezinyakazayo. Ngo-2008, wabonakala esikrinini esikhulu e ashisa izikhotha-sci-fi "Hancock" ngo-2011 - ku Thriller "Isikhathi", futhi ngo-2013 - kule drama "The Club" CBGB sika ". Esikhathini esizayo esiseduze afuna inkanyezi kule Thriller "Isimemo" lokhu umlingisi emangalisayo - Dzhonni Galeki.
On isethi uchungechunge sethelevishini "The Big Bang Theory" umlingisi wahlangana uzakwabo Keyli Kuoko. Le ntombazane wahlangana Johnny iminyaka emibili, kodwa ngo-2010 lo mbhangqwana kangangokuthi wanquma ukushiya. Cuoco Johnny Galecki ukuze silondoloze ubungane efudumele. Yini ethakazelisayo ngokuphila Dzhonni Galeki nentombi yakhe ukuphinda simo efanayo ochungechungeni. Esikhathini ifilimu, futhi, abalingiswa abazakhele bona nge beqala ukuhlangana, bese, ngemuva ubuhlobo besikhathi eside, ukuhamba. Manje inhliziyo Johnny matasa actress uKelli Garner.
Amaqiniso ethakazelisayo evela biography
Ngo-2012 abantu abangaba yizigidi ezingu-8 zamaRandi wathola Dzhonni Galeki.
Ukukhula umlingisi kuyinto 1.65 m.
Johnny Galecki inkanyezi kuvidiyo iqembu «Dave Matthews Band» ingoma «Satellite».
Johnny kuyinto enhle kakhulu ukudlala cello, izilaleli zahluleka uyibona omunye telekartin.
Ngo-2006, Johnny Galecki ukuthi dalulwa okokuqala enkundleni, ukudlala ukudlala yisifebe besilisa. Ngoba lo indima, umlingisi uqokelwe futhi wathola umklomelo waseshashalazini ebaluleke umhlaba.